शव जमिनमा, घाँटीमा ८ फिटको अजिङ्गर ! - Dainik Online Dainik Online
शव जमिनमा, घाँटीमा ८ फिटको अजिङ्गर !
काठमाडौं । अमेरिकामा एक महिलाको शव अजिङ्गरमा लटपटिएको अवस्थामा फेला परेको छ। उक्त अजिङ्गर ८ फिट लामो थियो। सबैभन्दा अचम्म लाग्ने कुरा त यो छ की, मृत फेला परेकी महिलाले आफ्नै घरमा करिब १४० वटा सर्प पालेर राखेकी थिइन् ।
घटना अमेरिकाको इंडियाना स्टेटको हो । त्यहाँकी ३६ वर्षीय लोरा हस्र्ट नामकी महिलालाई सर्प पाल्ने निकै शोख थियो। तर अचानक महिलाका छिमेकीले बुधबार लोराको शव देखे । त्यसपछि उनीहरुले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरे । द गार्जियलको एक रिर्पोट अनुसार महिलाका छिमेकी शरिफ मुनसनसँग कयौँ प्रजातिका सर्प छन्। लोराले पनि आफ्ना घरमा त्यसरीनै सर्प पालेकी थिइन् । लोराको शरीरमा लटपटिएको सर्प छिमेकी शेरिफको हो ।
जुन महिलाको घरमा पसेको थियो। प्रहरी घटनास्थलमा पुग्दा लोराको शब जमिनमा थियो भने उनको घाँटीमा ८ फिटको अजिङ्गर बेरीएको थियो । सम्बन्धित अधिकारीले अजिङ्गरलाई लोराको घाँटीबाट निकालेर शवलाई पोस्मार्टमका लागि पठाएका छन् । उनको मृत्यु कसरी भयो भन्ने बारे भने अझै पत्ता लागेको छैन् ।